GAROOWE: Dowlada Puntland oo Xariga ka jartay Xarrunta Guud ee Danbi baarista Puntland (Sawiro)
April 3, 2012 1:23 pm GMT - Written by PP - Edited by PP
Garoowe: (pp)- Madaxweynaha dowlada Puntland C/raxmaan Sheekh Maxamed Faroole ayaa maanta xariga ka jaray Xarrunta guud ee Denbi-baarista Puntland , xarruntaasi oo dhismaheeda ay gacan ka geysteen Hay’ada Qaramada midoobay ee dhanka horrumarinta ee loo yaqaan UNDP.
Puntland oo Xariga ka jartay Xarrunta Guud ee Danbi baarista Puntland
Furitaanka Xarruntaasi ayaa waxaa goob joog ka ahaa oo kale masuuliyiin ka tirsan dowlada Puntland oo ay ka mid ahaayeen M/kuxigeenka Puntland Gen.C/samad Cali Shire ,W/kuxigeenka Amniga Puntland C/risaaq Xareed Ismaacil ,taliye xigeenka booliska Puntland Col.Cabdulaahi Saalax Nadaaro ,taliyaha laanta baaritaanka danbiyada culus Puntland ,taliyaha ciidamada nabad sugida ,saraakiisha ciidamada booliska iyo taraafikada iyo weliba wakiilka UNDP Puntland Mr.Nick Presford ayaa goob joog ka ahaa furitaankii xarruntaasi ee maanta lagu wareejiyey dowlada Puntland.
Madaweynaha iyo masuuliyiinta kale ee ku weheliyey furitaanka xarrunta ayaa kormeer ku sameeyey dhammaan dhismaha hay’ada iyo qaybaha ay ka kooban tahay , waxaana masuuliyiinta Puntland ay kala wareegeen oo kale hay’ada UNDP Sadex gaari oo loogu talagalay inay xarruntu ku shaqayso mustaqbalka.
Ciiadamada Taraafikada oo ay u socdaan Casharo iyo tababaro
Masuuliyiinta Puntland ayaa waxay kaloo booqdeen Ciidamo ka tirsan Taraafikada oo tababar uu uga socday Xarrunta saldhiga booliiska , kuwaas oo ay ka waraysteen Xaaladooda guud iyo aqoonta ay barteen iyo saraakiisha Tababaraysa, kuwaas oo sheegay inuu mardhow uu u soo gaba-gaboobayo Koorasyada ku saabsan aqoonta taraafikada.
Masuuliyiinta Puntland ayaa waxay kaloo kormeereen Saraakiil iyo ciidamo loo tababarayo baaritaanka Danbiyada culus , kuwaas oo ka kala yimid dhammaan gobolada Puntland, kuwaas oo madaxdu ka dhegaysteen qaabka ay waxbarashadoodu u socoto.
Madaxweynaha iyo masuuliyiintii ku wehelisay kormeerka ayaa booqday oo kale Saldhiga weyn ee magaalada Garoowe iyo taliska ciidanka booliiska, iyagoo warbxin ka dhegaystay W/kuxigeenka Amniga iyo Taliye kuxigeenka booliiska Puntland, kuwaas oo ay ka dhegaysteen Warbixino ku aadan saldhigyada ay booqdeen.
Furitaanka hay’ada ayaa waxweyn ka taraysa wax ka qabashada dhanka ammaanka, iyadoo xarruntaasi ay maaraynayso wixii ku saabsan arrimaha Criminalka ee ka dhaca deegaanada Puntland, waana xarrun aad u ballaaran oo ku shaqayn karaan laamaha amniga oo dhan.